Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: NCGUB မှ ၀န်ကြီး ဦးဘိုလှတင့်နှင့် ဦးဟန်ညောင်ဝေ သို့ အိပ်ဖွင့်ပေးစာ
NCGUB မှ ၀န်ကြီး ဦးဘိုလှတင့်နှင့် ဦးဟန်ညောင်ဝေ သို့ အိပ်ဖွင့်ပေးစာ
သမိုင်းစဉ်လာတလျှောက် လေ့လာဆန်းစစ်လျှင် ရခိုင်တို့၏သမိုင်းမှတ်တမ်းများတွင် “ရိုဟင်ဂျာ” လူမျိုးဟူသော အသုံးအနှုံးဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့မှု စိုးစဉ်မျှမရှိခဲ့ပါ။ သူတို့၏မူရင်းဒေသဖြစ်သည့် ဘင်္ဂလား ဒေခ်ျ့နိုင်ငံ သမိုင်းတွင်လည်း ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဟူ၍ မတွေ့ရှိရပေ။ နောက်ထပ် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတခုဖြစ်သည့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ သမိုင်းတွင်လည်း ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဟူ၍ မတွေ့ရှိရသည့်အပြင်။ မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းတွင်ရော ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဟူ၍ ရှိခဲ့ပါသလား။ D.G.E. Hall ၏ A History of South-East Asia စာအုပ်တွင်လည်း ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဟူသော ဝေါဟာရ အသုံးအနှုန်းကို တလုံးတပါဒမျှ မတွေ့ရှိရပေ။
ထို့အပြင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးကို ကိုလိုနီပြုအုပ်ချုပ်ခဲ့သည့် အင်္ဂလိပ်တို့၏ အလွန်တိကျသော ဂေဇက် မှတ်တမ်းများတွင် ယင်းအမည် ထည့်သွင်းမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း အလျဉ်းမရှိပါ။ ဗြိတိသျှဂေဇက်တီယာ Gazetteers မှတ်တမ်းများတွင် Arakanese Muslim ဟူ၍ မှတ်တမ်းတင် ပါရှိသူများသည် ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု မှလွဲ၍ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးစံ၊ ဘာသာစကားတို့၌ ရခိုင်လူမျိုးနှင့် တူညီကြသည်။ ၄င်းတို့သည် ရခိုင်မင်းများ လက်ထက်ကပင် ဒေသတွင်းအပြန်အလှန် ဆက်ဆံရေးများကြောင့် ရခိုင်ဒေသသို့ ရောက်ရှိအခြေစိုက် နေထိုင် ခဲ့ကြသူများ ဖြစ်ကြသဖြင့် နေထိုင်မှုသက်တမ်း ကြာရှည်လာသည်နှင့်အမျှ ဘင်္ဂလီဘာသာစကား ပြောဆိုခြင်း အလျဉ်းမရှိသော ရခိုင်ဒေသတွင် ၄င်းတို့သည်လည်း ဘင်္ဂလီစဘာသာစကား လုံးဝမပြောတတ်ကြပေ။
မြန်မာပြည်အတွင်း၌ နေထိုင်ကြသည့် မွတ်ဆလင်လူမျိုးများသည်လည်း ရိုဟင်ဂျာဟူသော ဝေါဟာ ရကို ကြားတောင် ကြားဖူးကြလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဘာသာရေးအစွမ်းရောက် လူတစ်စုမှ (၇၈၆)ဂဏန်း နှင့်အညီ ၂၁ ရာစုအတွင်း ကမ္ဘာတ၀ှမ်း၌ အစ္စလန်ဘာသာ လွမ်းမိုးရေးအတွက် လုပ်ဆောင်နေကြခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် လာရောက်အလုပ် လုပ်ကိုင်နေကြသည့် အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အချို့မှ၊ သူတို့သည် လွန်ခဲသော နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်ခန့်ကတည်းက နေထိုင်လာခဲ့ကြသည့် ”နီပွန်းဂျာ“(Nippongya) တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများဖြစ်သည်ဟု သမိုင်းလိမ်ကိုဖန်တီး၍ အစ္စလမ်နိုင်ငံသစ်တစ်ခု ထူထောင်ရန် ကြိုးပမ်းနေကြကြောင်း သိရှိရသည်။ ဘင်္ဂလားအော်လှိုင်းသံ အမှတ်(၂)။ ထိုနည်းတူ မကြာမှီအချိန်တွင်လည်း ဗမာရိုဟင်ဂျာ၊ ကရင်ရိုဟင်ဂျာ၊ ရှမ်းရိုဟင်ဂျာ၊ မွန်ရိုဟင်ဂျာ၊ ချင်းရိုဟင်ဂျာ စသည်ဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပေသည်။
၁၉၅၉-ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလထဲမှာ ဦးနု ရခိုင်ပြည်သို့ မဲဆွယ်ရန်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ မောင်တောမြို့ နယ်၌ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတရားဟောပြောခဲ့စဉ်က ”သန့်ရှင်းသာ အနိုင်ရခဲ့ရင် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးလို့ သတ်မှတ် ပေးမယ် မြန်မာ့အသံက တိုင်းရင်းသားအစီအစဉ်တွေမှာ ရိုဟင်ဂျာဘာသာနဲ့ အသံလွင့်ပေးမယ်လို့“ ဂတိပေးခဲ့သည်။ အမတ်နေရာ သုံးနေရာ ရရန်အတွက် အာဏာရူးခဲ့သည့် ဦးနုကြောင့် ရိုဟင်ဂျာဆိုသည့် နာမည် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျီးကန်းငှက် ညောင်သီးကိုစား၍ တိုက်နံရံမှာ ချီးယိုခြင်းသည် လောလောဆယ်၌ အရေးမကြီးဟု ထင်ရ၏။ သို့သော် ညောင်ပင်ကြီးလာမှ ပြသနာတက်ရခြင်းမျိုး ကျနော်တို့ ကြုံနေရသည်။ အများစုက အဆောက်အဦး မပျက်စီးရန် ညောင်ပင်အား ခုတ်လှဲချင်သော်လည်း တချို့က ညောင်ပင်၏ ထည်ဝါမှုနှင့် အရိပ်အာဝါသကို အပျက်အစီး မခံနိုင်ဖြစ်နေကြရသည်။
”ရိုဟင်ဂျာ“လူမျိုးဟူ၍ ကမ္ဘာက အသိအမှတ်ပြု လက်ခံလာအောင် အမျိုးမျိုးကြိုးစားအတည်ပြုနေ ကြသူတို့သည် သူတို့၏ ကိုယ်ကျိုးအတွက် အမြတ်ထုတ်နေကြခြင်းသာဖြစ်သည်။ ထိုအထဲတွင် ဟန်ညောင်ဝေ နှင့် NCGUB မှ နိုင်ငံရေးလုပ်စားနေသူ ဦးဘိုလှတင့် လည်းပါဝင်သည်။ ထိုဟန်ယောင်ဝေနှင့် အပေါင်းပါတစ် စုတို့သည် မြန်မာပြည်သူကို အကြောင်းပြုပြီး နိုင်ငံတကာမှ ငွေကြေးများတောင်းခံ၍ လုပ်စားလာကြသည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်လာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ယခုအချိန်ထိ စစ်အစိုးရ ကိုဆန့်ကျင်သည့် လုပ်ဆောင် ချက်ဟူ၍ မယ်မယ်ရရ တစိုးတစဉ်းမျှ မတွေ့ရှိရသည့် အတွက်တာကြောင့် မြန်မာဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး အတွက် ထောက်ပံ့နေကြသည့် နိုင်ငံတကာ အလှူရှင်များမှ ယခုအခါ ရပ်တန့်လိုက်ပြီး ဖြစ်ကြာင်းသိရှိရသည်။ NCGUB ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ညွန့်ပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့ကိုလည်း နိုင်ငံတကာမှ နှစ်ပေါင်း၂၀ဆယ်ကျော် ထောက်ပံ့ခဲ့ သော်လည်း မည်မည်ရရ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဟူ၍ လက်ဆုတ်လက်ကိုင် မပြနိုင်သဖြင့် ယခုအခါ၌ ထောက်ပံ့ ကြေးငွေများ ဖြတ်တောက်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ဘင်္ဂလီများကလည်း ဘူးသီးတောင် မောင်တော နယ်မြေကို ”အာကစ္စတန်နိုင်ငံ“ ထူထောင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာရှိ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံများမှ အလှူငွေများကောက်ခံသည်။ ထိုသို့ အလှူခံ၍ ရရှိလာသည့် ငွေကြေးများကို ဦးဟန်ညောင်ဝေလက်ထဲသို့ ပုံအပ်ပြီး တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ကောင်စီတွင် ပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် ရိုဟင်ဂျာကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခိုင်း နေခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုမျှနှင့် မရောင့် ရဲနိုင်သေးသည့် ဦးဟန်ညောင်ဝေသည် မျောက်ပြ၍ ဆန်တောင်းသည့်နှယ်၊ ရိုဟင်ဂျာဆိုသူတို့ကို အကြောင်း ပြု၍ အာရပ်နိုင်ငံများမှလည်း ငွေကြေးတောင်းခံခဲ့သေးသည်။ ရိုဟင်ဂျာဆိုသူများသည် သူတို့ကိုယ် သူတို့ မျောက် ဖြစ်၍ဖြစ် မှန်းမသိ အလွန်သနားစရာကောင်းလှ၏။
ရိုဟင်ဂျာဆိုသူများကို အကြောင်းပြု၍ ရရှိလာသည့် ငွေကြေးများထဲမှ မပြောစလောက် ငွေကြေး အနည်းငယ်မျှကို အသုံးပြုပြီး ရိုဟင်ဂျာနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်တချို့ ရလို ရငြားအထင်နှင့် နိုင်ငံတကာမှ ရခိုင်သမိုင်းသုတေသီ ပညာရှင်များကို ဖိတ်ခေါ်၍ ၂၀၀၅-ခု၊ နိုဝင်္ဘာလတွင် ရခိုင်သမိုင်း သုတေသန ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကို ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ ချူလာလောင်ကွန်တက္ကသိုလ်တွင် ပြုလုပ်ပေးခဲ့ သည်။ သိုသော်လည်း ထိုရခိုင်သမိုင်း သုတေသနဆွေးနွေးပွဲမှ ရိုဟင်ဂျာနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက် ဟူ၍ ဘာတစ်ခုမျှ မရရှိခဲ့သည့်အတွက် ဆွေးနွေးပွဲ၌ တင်သွင်းခဲ့ကြသည့် နိုင်ငံတကာမှ ရခိုင်သမိုင်းပညာရှင် များ၏ သုတေသနစာတမ်းများနှင့် ဆွေးနွေးပွဲ ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းများ၊ Record များအားလုံးကို ညီညီလွင် နှင့် ပူးပေါင်း၍ ဖျောက်ဖျက်ပစ်ခဲ့ကြသည်။ ယခုအချိန်ထိ အစအနတောင် ရှာမတွေ့တော့ပေ။ Ph.D ပညာ ရှင်တစ်ဦး ၏ သုတေသနစာတမ်းတစ်စောင်သည် အနှစ်ငါးဆယ်ခန့် တည်တန့်ခိုင်မြဲနိုင်သည်။ ထိုသုတေသန စာတမ်းများ ကိုသာ စာအုပ်အဖြစ်ထုတ်ဝေဖြစ်ခဲ့ပါက ယခုအချိန်၌ ရိုဟင်ဂျာသမိုင်းလိမ်ကိစ္စကို ရှင်းနေရန်မလို တော့ပေ။
ထို့အပြင် ”ဦးဟန်ညောင်ဝေအား တိုင်းရင်းသားလူမျိုး နိုင်ငံရေးစောင့်ကြည့်ကွန်ယက် - Burma Ethnic Politics Watch Network (BEPWN)“ မှ မေလ၊ ၂၂၊ ၂၀၁၀ ရက်စွဲ့ဖြင့် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ဟု ဆိုသူ ဦးဟန်ညောင်ဝေအပါအ၀င် ၇ ဦးအမည်စာရင်းကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီး ၎င်းတို့ကို ကိုယ်ကျိုးရှာ နိုင်ငံရေး သမား များအဖြစ် စွပ်စွဲလိုက်သည်။ တိုင်းရင်းသားများ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီရရှိရေးတို့ကို ထိခိုက်နစ် နာအောင် လုပ်ခြင်းတို့ကြောင့် လည်းကောင်း၊ စစ်အာဏာရှင် သက်တမ်းရှည်အောင် အားပေးဆောင် ရွက်နေ ခြင်းတို့ကြောင့် လည်းကောင်း၊ ထိုသူတို့နှင့် ပတ်သက်ပြီး တိကျသော အထောက်အထားများ၊ သက်သေများ ရှိသောကြောင့် လည်းကောင်း၊ ထိုသူတို့ကို နာမည်ပျက်စာရင်း သွင်းလိုက်သည်ဟု ဖေါ်ပြထားသည်။ အပြည့်အစုံကို www.burmaethnicpoliticswatchnetwork.com
ယခုတော့ ဟန်ညောင်ဝေနှင့် NCGUB မှ ဦးဘိုလှတင့်သည် အကြံကုန်လို့ ဂဠုံဆားချက်ဆိုသကဲ့သို့ ၂၀၁၀၊ ဧပြီလ က ဆော်ဒီနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ပြီး ငွေကြေးအလှူခံခဲ့ကြ ကြောင်းသိရှိရသည်။ အလှူပေးမည် ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်း အလကားတော့ ပေးမည်မဟုတ်။ တစ်ခုခုတော့ တောင်းဆိုပေလိမ့်မည်။ ဆော်ဒီနိုင်ငံသည် သူတို့မွတ်စလင် နိုင်ငံပြန့်ပွါးရေးအတွက် ငွေကြေးအမြောက်အများကို သုံးစွဲ၍ လုပ်ဆောင်နေသည်ကို လူတိုင်း သိသည်။ ယခုလည်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေး အဆောက်အဦး ပြိုပျက်သွားသည့် နေရာအနီး၌ ကုလားဗလီ ဆောက်လုပ်ရန် ဆော်ဒီနိုင်ငံမှ ငွေကြေး ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ ကျခံမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ ယခုလည်း ဆော်ဒီနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတစ်ခု ပေါ်ထွန်းလာစေ ရန် အတွက် ဦးဟန်ညောင်ဝေနှင့် NCGUB မှ ၀န်ကြီးဦးဘိုလှတင့်တို့အား ငွေကြေး အမြောက်အများ ပေး၍ ဖေါ်ဆောင်ခိုင်းဟန်တူသည်။ သို့ကြောင့် အမေရိကန်လွှတ်တော် အမတ်အချို့နှင့် နီးစပ်မှုရှိသည့် NCGUB ၀န်ကြီးများသည် အမေရိကန် ကွန်ကရက်အမတ်များကို ပေါင်း၍ “ရိုဟင်ဂျာ”အား တိုင်းရင်းသားအဖြစ် အသိ အမှတ်ပြုရန် မြန်မာစစ်အစိုးရအား တွန်းအားပေးသည့် စာတန်းတစ်စောင်ကို အမေရိကန်လွှတ်တော်တွင် တင်သွင်းခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။
ဤအဖြစ်မျိုးသည် ၁၉၉၂-ခုနှစ်တွင် တစ်ခါ ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။ ကိုကျိုးရှာ ဒေါက်တာနိုင်အောင်နှင့် (ထိုအ ချိန်က ABSDF ဥက္ကဌ)လူတစ်စုမှ န၀တ စစ်အစိုးရကိုတိုက်ရန် ငွေကြေးလိုသည်ဟုအကြောင်းပြကာ ၁၉၉၂-ခုနှစ် ဇွန်လ ၇ ရက်နေစွဲဖြင့် ABSDF (ဗဟို)၏ သုတေသနဌာနမှ စာမျက်နှာ ၄၉ မျက်နှာပါရှိသည့် ရိုဟင်ဂျာ သမိုင်း နှင့် ပတ်သက်သည့် စာတမ်းလိမ်တစ်စောင်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ဖူးသည်။ ထိုစာတမ်းကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် အတွက် (ABSDF)အဖွဲ့သည် ဒေါ်လာတစ်သန်းကျော်ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် လူဦးရေအားဖြင့် ၇ သောင်းမှ ၁ သိန်း ၂ သောင်းနီးပါးအထိရှိသော မွတ်ဆလင် လူငယ်လူရွယ်များကို အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံရှိ အယ်လ်ကိုင်းဒါးနှင့် တာလီဘန်စခန်းများတွင် လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးပြီးလျှင် အမေရိကရှိ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဆောက်အဦးမှအစ အာရှ၊ အာဖရိကနှင့် အရှေ့ အလယ်ပိုင်း ဒေသများတွင် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခိုင်းခဲ့သည်။ အယ်လ်ကိုင်းဒါးသည် တပ်သားအရေ အတွက်အားဖြင့် အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ အင်အားရှိသော အစ္စလမ်မစ်အဖွဲ့များကို အပြင်းအထန် သင်တန်း ပေးပြီးနောက်၊ လူငယ်တို့၏ ဦးနှောဏ်ထဲသို့ ဘာသာရေးစစ်ပွဲအတွက် လူသတ်ရပါသည်ဆိုသော အတွေး အခေါ် တစ်ရပ်ကို ရိုက်သွင်းပေးသည်။ ယင်း မိန္ဆာအတွေးအခေါ်ကြောင့် ကမ္ဘာတ၀ှမ်းသို့ အကြောက်တရားနှင့် အကြမ်းဖက်မှုများ ပြန့်နှံ့ ခဲ့ရသည်။
ထိုအထဲတွင် အာရကန်ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသားအဖွဲ့(ARNO)နှင့် ရိုဟင်ဂျာညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ (RSO) တို့လည်း ပါဝင်ကြသည်။ ၄င်းအဖွဲ့တို့ကို အာဖဂန်နစ္စတန်ရှိ စခန်းများတွင် လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးပြီး မြန်မာ ဘင်္ဂလားနယ်စပ်တွင် လှုပ်ရှားစေခဲ့သည်ဟု ၀ီလီယံဂုဏ်း၏ အစီအရင်ခံစာ တစ်စောင်တွင် ဖေါ်ပြထားသည်။ (၀ီလီယံဂုဏ်းသည် ခရစ်ယန်ဖွံ့ဖြိုးရေး လမ်းညွန်အသင်း၏ ဦးဆောင်ဒါရိုက်တာလည်းဖြစ်၊ လူအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုနှင့် ညှည်းပမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်သော နိုင်ငံတော်အဆင့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ ဖြစ်သည်။)
ထိုကဲ့သို့ အကြမ်းဖက်မှုများကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ရိုဟင်ဂျာဆိုသူများကို ဦးဟန်ညောင်ဝေနှင့် NCGUB ၀န်ကြီး ဦးဘိုလှတင့်တို့သည် ထိုသူတို့ကို အားပေးအားမြှောက်ပြုလျှက် မိမိတို့၏ ကိုယ်ကျိုးစီးပွါး အတွက် အသုံးချနေခြင်းသည် မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားတို့၏ အမျိုးသားလုံခြုံရေးကို မျက်ကွယ်ပြုထားပြီး ပြည်ထောင်စုအရေခြုံထားသော အမျိုးသားသစ္စာဖောက်များလုပ်ရပ်သာ ဖြစ်နေပေသည်။ သို့ကြောင့် ဦးဟန်ညောင်ဝေနှင့် NCGUB ၀န်ကြီးဦးဘိုလှတင့်တို့အား အသိပေးလိုသည်မှာ ကျနော်တို့ အဖိုးအဖီးများ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည့် ရခိုင်ပြည်မြေဧရိယာကို တစ်လက်မခန့်မျှ ဖဲ့ထုတ်ပေးမည်မဟုတ်။ ထိုသို့ ဖဲ့ထုတ် ယူရန် ကြိုးစားလာသူ မှန်သမျှကိုလည်း ကျနော်တို့ ရခိုင်တစ်မျိုးသားလုံး၏ ဘုံရန်သူအဖြစ် သတ်မှတ်မည်ဖြစ် ကြောင်းနှင့်၊ ရခိုင်လူမျိုးတို့၏ အမျိုးသားလုံခြုံရေးကို ထိပါလာသူမှန်သမျှကို ကျနော်တို့ ရခိုင်တစ်မျိုးသားလုံး၏ အမျိုးသား ဘုံရန်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ကြာင်း အလေးအနက် အသိပေးအပ်ပါသည်။
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: NCGUB မှ ၀န်ကြီး ဦးဘိုလှတင့်နှင့် ဦးဟန်ညောင်ဝေ သို့ အိပ်ဖွင့်ပေးစာ . All Rights Reserved